नयाँ दैनिक | मुख्य समाचार मुख्य समाचार – Page 43 – नयाँ दैनिक
‘धर्म’को कर्ममा कमल थापा
पुस १०, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा धर्मको कर्ममा लागेका छन् । हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै फागुन दोस्रो साताबाट आन्दोलन सुरु गर्ने उनको भनाई छ । धर्म निरक्षेपतावादीसँग मिलेर सरकारमा गएका थापाले प्रतिपक्षमा बस्नु परेपछि थालेको धर्मको कर्ममा कतिले साथ दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
नेपाल आइडल रवि ओड मातृशोकमा
पुस ११, काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन–२ का विजेता रवि ओड मातृ शोकमा परेका छन् । आज बिहान ७ बजे रविकी आमा विष्णा ओडको करेन्ट लागेर निधन भएको हो । विष्णा जम्मा ४५ वर्षकी हुन् ।
बुधबार बिहान करेन्ट लागेपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार पानी तान्ने क्रममा मोटरब...
नेतालाई सुझाव : ‘तुलसी’ चिन्नुस् !
पुस १०, काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपाका युवा नेता नरेश रोकायले पार्टीका नेताहरुलाई तुलसी गिरीबाट पाठ सिक्न सुझाव दिएका छन् । तुलसी गिरीजस्तै छुचुन्द्रो प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरु बर्तमान सरकारका महत्वपूर्ण कामकारबाही प्रभाव पार्न सक्रिय रहेकोमा उनले चिन्ता समेत जाहेर गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘बि.स. २०१० मा तु...
हामी किन अल्पविकसित भयौं ?
‘समृद्धि’ यतिबेला हामी नेपालीको राष्ट्रिय भोक बनेको छ। यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। किनकि भोक लागेपछि नै भोजनको बन्दोबस्ती सुरु हुन्छ। समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा गम्भीरतापूर्वक प्रवेश गर्नुअघि हामीले केही निर्मम प्रश्नहरू आफैंसँग गर्न जरुरी छ। आखिर हामी किन अल्पविकसित भयौं ? ऐतिहासिक रूपले हामी किन र कसरी पछि पर्‍यौं ? हामीसरहका अरू देश चितुव...
‘सालको पात टपरी हुनी..’ सुपरहिट
‘सालको पात टपरी हुनी, हे बरै नहुनी सल्लैको !
तिम्रो माया कति छ कति, हे बरै नलाउ पछि हल्लैको....!’
पछिल्लो समयमा भाइरल बनेको गीत हो यो । यो गीत बच्चादेखि वृद्धसम्मले रुचाएका छन् । बिहे, पार्टी र दोहोरी साँझमा मात्रै होइन, सर्वत्र यही गीत बजेको सुनिन्छ । तिहारको देउसी–भैलोमा यही गीत घन्कियो । मं...
जनयुद्धका घाइतेको अनशन तोडियो, ४ बुँदे सहमति
पुस ९, काठमाडौँ । बिगत दुई हप्तादेखि आमरण अनसनरत जनयुद्धका घाईते तथा अपाङ्ग योद्धाहरुको अनशन तोडिएको छ । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयसँग ४ बुँदे सहमति भएपछि उनीहरुले अनशन तोडेका हुन् । अनशन आजैबाट तोडिएको र घाईतेको उपचार पनि सुरू भएको वाइसियल नेपालका महासचिव सुवोध सेर्पालीले जानकारी दिए ।
सहमतिको लागि पहल गर्ने युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने र...
छोरीको बिहेमा अमेरिका पुगे जनार्दन
पुस ९, काठमाडौं । नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा छोरीको बिहेका लागि अमेरिका पुगेका छन् । छोरी कविता शर्माले चितवनका आलोकप्रताप राणासँग बिहे गर्ने भएपछि शर्मा अमेरिका पुगेका हुन् । कविता र आलोकको बिहेमा दुवै परिवारका अभिभावक सहभागी भए । जनार्दन नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक छाडेर छोरीको बिहेमा सहभागी हुन अमेरिका गएका हुन् । बिहेपछि शर्माको नाता सम्ब...
अख्तियारमा वर्षमा १९ हजार उजुरी
पुस ९, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो २८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले राष्ट्रपतिसमक्ष २ सय ४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३र७४ अख्तियारमा १९ हजार ४ सय उजुरी परेको छ । जसमध्ये ६ हजार ४ सय ५८ वटा...
चीनमा मृत्युदण्ड घट्दो
पुस ८, काठमाडौ । चीनमा मृत्युदण्डको सजाय हुने क्रम घट्दो अवस्थामा रहेको छ । तर, यो प्रावधान हट्न अझै टाढाको विषय देखिन्छ । मृत्युदण्डको प्रावधानप्रति चिनियाँको अझै धेरै समर्थन रहेको चीनको सवोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए । मानवअधिकारवादी समूहका अनुसार बेइजिङले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकको तुलनामा हरेक वर्ष मृत्युदण्ड दिने क्रम बढिरहेको भए पन...
अनौठो रोग ‘प्रायपिजम्’बारे बुझौँ
एक दिन २२ बर्षीय युवा हस्पिटलको ईमर्जेन्सीमा आए । आत्तिँदै आफ्नो समस्या बताए । उनको समस्या सामान्य थिएन । यसो भनौँ, यस्तो केशको उनी नै पहिलो बिरामी थिए । चिटचिट पसीना निकाल्दै ऊनी निस्सासिए झैँ बोले, मेरो लिङ्ग असाध्यै दुख्यो हजुर ! हामीले सोध्यौँ, कति समय भयो ? केही काम बिर्सेझैँ उनले भने-अस्तिदेखि हो यस्तो भको । उनले भने अनुसार, उनको लिङ्ग ...
देश कहिले बन्छ ?
‘ल, यता आउनुस् यार फोटो खिचम्, फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन के थाहा ?’ खल्तिबाट मोबाइल झिकेर मन कुँड्याउँदै साथी बोल्यो, ‘अपराध गरेर जेल जान परेजस्तै लाग्छ यार विदेश जान मलाई !’
म के भनौँ, के भनौँ भएँ । सत्य कुरा भनौँ उसको मन दुख्थ्यो, नभनौँ आफ्नै मन खुर्सानीको धुँवा लागेजस्तो उकुसमुकुस थियो । फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन..उसका ती शब्दले नराम...
पोखरामा ‘शिला आर्ट’ थाल्ने को हुन् यी ?
गरीब मुलुक भए पनि हाम्रो देशमा ‘ठालु’ प्रवृत्ति बढी छ । अधिकांस मान्छेहरु पैसा कमाउन त चाहन्छन् तर, कामको नाममा सिन्को भाँच्न खोज्दैनन् । अरुलाई सल्लाह दिँदैमा उनीहरुको दिन बित्छ, महिना बित्छ, बर्ष बित्छ र जीवनै बित्छ । छोटो समयमै धनी बन्ने र अझै धनी बन्ने सपना पूरा गर्न उनीहरु जेसुकै गर्न तयार देखिन्छन् । कहिलेकाहि त यस्तो भान हुन्छ, यहाँ दय...